त्रासदीपुर्ण यात्राको सम्झना !	Posted on अप्रील 28, 2015	by baabajee बैसाख १२ गतेका दिन भुकम्प आउँदा म दाङमा थिएँ । भुकम्पको कम्पन खुट्टामा मात्रै हैन सोसल मिडियामा समेत ब्यापक रुपमा आउन थालेपछि तत्कालै काठमाण्डौँ सम्पर्क गरेँ । फोन लाग्दै लागेन । अनि सुर्खेत घरमा फोन लगाएँ । बुवा आमाले त्यहाँ पनि भुकम्पको झड्का महसुस गरेको तर केही नभएको जानकारी दिनुभयो । मलाई चिन्ता काठमाण्डौँकै लागिरह्यो किनकी छोरी र श्रीमति त्यहिँ थिए । केहि घण्टाको प्रयास पछि फोन लाग्यो र उनीहरुले ठुलो भुकम्प आएको र आफूहरु बाहिर खुला स्थानमा सुरक्षित रहेको जानकारी गराए ।
कतिखेर नेपालगञ्ज पुगियो, थाहा पनि भएन । नेपालगञ्ज पुगेर प्लेनबारे बुझ्दा आईतबार बुद्ध एयरका कुनै उडान नहुने र सोमबार पनि निकै कम संभावना रहेको जानकारी पाईयो । अन्तत: काठमाण्डौँ नफर्किई नहुने काम भएका चारजना साथीहरु हरी चौधरी, म, जीवन र ईन्द्र साथीहरुले प्लेन नउडे गाडीमा भएपनि जाने योजना बनायौँ । दुर्भाग्यवश: उक्त दिन नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौँका लागि कुनै पनि सार्वजनिक यातायात चलेका रहेनछन् । किनकी भुकम्पको झड्का निरन्तर आईरहेको कुरा सबैलाई विभिन्न माध्यमबाट थाहा भई नै रहेको थियो । अँझ कतिलाई त आगामी भुकम्पको भविश्यवाणीको सुचना(भ्रम) पनि आईरहेको रहेछ । उनीहरु हामीलाई काठमाण्डौँ नफर्किन आग्रह गर्दैथिए । भाडाका साना सवारीधनीहरु पनि सकेसम्म गाडी भाडामा नदिने मनशायका साथ आनाकानी गर्दैथिए । अन्तत: एउटा गाडीको करिब करिब टुँगो लाग्यो र उक्त गाडी दाङबाट आईरहेको भन्ने सुचना पाएर हामीहरु अर्को गाडीमा सामान प्याक गरेर कोहलपुरसम्म आयौँ ।
कोहलपुर पुगेर त्यो गाडीलाई फर्काईदियौँ अनि दाङबाट आउने गाडीलाई कुर्न थाल्यौँ । यतिबेला ४ बजेको थियो । कुर्दा कुर्दै ५ बज्यो । त्यहाँ अरु तीनजना साथीहरु निरज, निर्मल र पंकज थपिए । उनीहरु एकछिन बर्दिया जान हिँडेका थिए, हामी काठमाण्डौ फर्किन । उनीहरु हामीलाई विदा गरेर बर्दिया लागे, हामी उक्त गाडीलाई कुरिरह्यौँ कोहलपुरमा बसेर । कुर्दा कुर्दै साढे आठ बज्यो । अब नजाने कि भन्ने पनि लाग्यो । किनभने यात्राबाटै आएको गाडीलाई यति लामो यात्रा फेरी गराउँदा समस्या पर्ला भन्ने लाग्यो । यता परिवारका मान्छेलाई ४ बजे नै नेपालगञ्जबाट हामी काठमाण्डौँका लागि कोहलपुरतिर हिँडिसक्यौँ भनेर अपडेट गराईसकिएको थियो सबैजनाले । ४ बजे हिँडेको मान्छे कम्तिमा यतिन्जेल कपिलबस्तुको गोरुसिंगे त कटिसकेको हुनुपर्ने । तर हामी कोहलपुरमै रुमल्लिईरहेका थियौँ । यतिन्जेल बर्दिया पुगेका तिनजना साथीहरु काम सकेर फर्किईसकेका थिए । उनीहरु हामीलाई देखेर अचम्मित भए । किनकी हामी अँझै कोहलपुरमै थियौँ ।
just human	View all posts by baabajee →	This entry was posted in Uncategorized and tagged accident, Article, Chitwan, Dhading, earthquake, nepalquake. Bookmark the permalink.	← गजल